Otyholwa ngokubulala itsha-ntliziyo lomzabalazo womhlaba ufumene ibheyile – Elitsha
28th June 2017 Mzi VelapiCape Town, Iyavela 0 Xhosa
u Mthunzi " Ras Moziah" Zuma owadutyulwa wabulawa. Ithatyathwe ngu Ashraf Hendricks
Otyholwa ngokubulala itsha-ntliziyo lomzabalazo yomhlaba u Alfred Bangini, 59 uye wanikwa ibheyile ye R500 yinkundla yaseKhayelitsha namhlanje. U Mthumzi “Ras Moziah” Zuma ubengomnye wabahlali base Town Two e Khayelitsha abathe bangena kumhlaba okude kufuphi kwinkundla ka mantyi yase Khayelitsha nalapho bathe bobelana ngomhlaba baze bokha amatyotyombe.
U “Ras Moziah” nanjengoko ebesaziwa zizihlobo nabo ebesemzabalazweni nabo waye wabulawa ngokudutyulwa ngomhla we 28 ku Canzibe. Ngokwengxelo ye GroundUp News, owazibonelayo uthi loka Zuma wabulawa ngelixa babevale indlela edlula kulomhlaba babewuthathile. Lo wazibonelayo waxelela I GroundUp ukuba wathi u Zuma ezama ukucacisela umqhubi wemoto ukuba kwenzeka ntoni, suka waphuma umqhubi wathulula ngembumbulu kulo ka Zuma.
Udadebo Zuma, U Zanele uxelele iElitsha ukuba abakalahli themba kuba alipheliswanga ityala koko limisiwe. “ Asikazukuphela amandla bude ubulungisa benzeke”, utshilo lo nkosikazi unama 48 eminyaka. Loka Zuma uthi zininzi impazamo ezenziwe ngumcuphi wetyala. Abo batyholwa ngokubulala u Zuma baphinde bayobanjwa emva koqhanqalazo lwabahlali kuba umcuphi wayesithi ‘akukho bungqina bubambekayo’. Lo utyholwa no Bangini akakaphinde abanjwe kwaye abo balwelwa umhlaba bathi lomtyholwa wesibini wabalekela eMpuma Koloni.
Ityala limiselwe umhla we 18 kweye Thupha.
Also read: Batyityimbiselwe umnwe oonqevu eKhayelitsha